2021 June Alibaba Online Tradeshow Liveshow Fandaharam-potoana
avy amin'ny admin tamin'ny 21-06-07
Daty: 15:00 hariva, 17 Jona CST 1. Fampidirana ny rivotra mafana fampiononana ny rivotra mafana 2. Fanolorana sy fampiharana ny efitrano tokana ERV 3. Fanaraha-maso WIFI DMTH series ERV + fitsapana UVC d ...
2021 Alibaba fandaharana mivantana amin'ny fandaharana
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-02
Fotoana mivantana votoatiny lehibe mandray ny kaody QR Mivantana amin'ny Alibaba 14:00 hariva, 4 martsa (CST) Eco Vent Pro Plus Energy Saving Ventilation ary serivisy fanadiovana famokarana vokatra PPE Tom, Andrew https: //activity.ali ...
Tombontsoa sy fatiantoka: maodely vs rindrina fanadiovana nentim-paharazana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-22
Raha ny famolavolana trano fidiovana vaovao, ny lehibe indrindra, ary mety ho fanapahan-kevitra voalohany horaisinao dia ny hoe maotina ve ny fanadiovana ataonao na fananganana mahazatra. Misy tombony sy fetra ny tsirairay amin'ireo safidy ireo, ary mety ho sarotra ny mamaritra ...
Tena mandeha ve ny mpanadio rivotra?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-01-18
Angamba voan'ny allergy ianao. Angamba nahazo fampandrenesana fanindriana be loatra ianao momba ny kalitaon'ny rivotra ao amin'ny faritra misy anao. Angamba henonao fa afaka manampy amin'ny fisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19. Na inona na inona antonanao dia mihevitra ny hahazo fanadiovan-drivotra ianao, saingy lalina, tsy afaka manampy ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-13
Ny rano dia nampiasaina mba hampangatsiaka sy hanafanana ny rivotra ao anaty coil fifanakalozana hafanana fantsom-bozaka efa hatramin'ny nanombohan'ny hafanana sy ny mari-pana. Ny hatsiaka ny tsiranoka sy ny fahasimban'ny coil vokatr'izany dia efa teo koa nandritra ny fotoana lava. Olana voarindra izay ...
Ny tsy fitoviana eo amin'ny efitrano fidiovana tsara sy ratsy
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-22
Hatramin'ny 2007, Airwoods natokana hanome vahaolana feno hvac ho an'ny indostria isan-karazany. Manome vahaolana matihanina amin'ny efitrano madio koa izahay. Miaraka amin'ny mpamorona ao an-trano, injenieran'ny fotoana feno ary mpitantana tetikasa natokana ho azy, ...
Ny fototry ny FFU sy ny famolavolana ny rafitra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-17
Inona ny Fan Fan Unit? Ny singa fanivanana mpankafy na ny FFU dia tena ilaina amin'ny fanamafisam-peo amin'ny laminar miaraka amina mpankafy sy motera. Ny mpankafy sy ny motera dia eo handresena ny tsindry statis an'ny sivana HEPA na ULPA miorina anaty. Ity dia benefi ...
Ahoana ny tombotsoan'ny indostrian'ny sakafo avy amin'ny trano fidiovana?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-15
Ny fahasalamana sy ny fahasambarana an-tapitrisany maro dia miankina amin'ny fahafahan'ny mpanamboatra sy ny mpanamboatra entana mitazona tontolo azo antoka sy tsy misy mandany mandritra ny famokarana. Izany no mahatonga ny matihanina amin'ity sehatra ity hanana fenitra henjana kokoa noho ny ...
Airwoods HVAC: Fampirantiana Tetikasa Mongolia
Nahavita tetik'asa 30 mahery tao Mongolia i Airwoods. Anisan'izany ny magazain'i Nomin State Department, Tuguldur Shopping Center, Hobby International School, Sky Garden Residence ary maro hafa. Nanokana ny fikarohana sy ny teknolojia izahay ...
Fampidinana ireo kaontenera ho an'ny tetik'asa PCR Bangladesh
Ny famonosana sy ny fametahana tsara ny kaontenera no lakilen'ny fahazoana tsara ny fandefasana azy rehefa mandray amin'ny mpanjifa hafa ny mpanjifanay. Ho an'ireo tetikasan'ny efitrano fanadiovana any Bangladesh, nijanona teo an-toerana ny mpitantana ny tetikasanay Jonny Shi mba hanara-maso sy hanampy ny fizotran'ny entana rehetra. Izy ...
8 Tsy tokony hialana amin'ny hadisoana fametrahana rivotra madio
Ny rafi-pitobiana dia iray amin'ireo zava-dehibe amin'ny famolavolana sy ny fananganana Cleanroom. Ny fizotry ny fametrahana ny rafitra dia misy fiatraikany mivantana amin'ny tontolon'ny laboratoara sy ny fikojakojana ny fitaovana fidiovana. Mihoatra ny ...
Fanontaniana momba ny laboratoara PCR matetika (Fizarana B)
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-24
Amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny fitsapana Covid-19 ankehitriny izay niavian'ny tatitra rehetra dia mampiasa PCR. Ny fitomboana be amin'ny fitsapana PCR ka mahatonga ny laboratoara PCR lohahevitra mafana amin'ny indostrian'ny trano fidiovana. Ao amin'ny Airwoods, tsikaritray ihany koa ny fitomboan'ny PCR lab inq ...
Fanontaniana momba ny laboratoara PCR matetika (Fizarana A)
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-22
Raha ny famolavolana vaksinina no lalao lava amin'ny ady atao amin'ny coronavirus vaovao, ny fitsapana mahomby dia lalao fohy satria ny mpitsabo sy ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka dia mikatsaka ny hanafoanana ny aretina. Miaraka amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena manokatra fivarotana sy servi ...
Inona avy ireo singa fototra amin'ny famolavolana trano fidiovana?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-21
Ny efitrano fidiovana dia ampiasaina amin'ny indostria rehetra izay misy ny sombintsombiny kely manelingelina ny fizotry ny famokarana. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny toekarena ara-tsosialy, indrindra ny andrana siantifika sy ny famokarana teknolojia avo lenta ...
Ahoana ny famoahana ireo vokatra ao amin'ny efitrano fidiovana ao anaty kaontenera mpitatitra entana
Tamin'ny volana jolay lasa teo dia nandefa ny fifanarahana tany aminay ny mpanjifa mba hividy takelaka sy mombamomba ny aliminioma ho an'ny tetikasan'izy ireo amin'ny birao sy ny efitrano mangatsiaka. Ho an'ny birao dia nisafidy takelaka sandwich materialy magnesium vera izy ireo, miaraka amin'ny 50mm ny hateviny. Mandany vola ny fitaovana, afo ...
Hetsika HVAC 2020-2021
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-26
Ny hetsika HVAC dia tanterahina amin'ny toerana maro manerana an'izao tontolo izao mba hampirisihana ny fivorian'ny mpivarotra sy ny mpanjifa ary koa ny fampisehoana ny haitao farany amin'ny sehatry ny fanafanana, ny rivotra, ny rivotra ary ny fampangatsiahana. Hetsika lehibe hijerena ...
Dos sy Dont ho an'ny fitsapana Molecular
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-16
Ny fomba fikarohana ny molekiola dia manana fahaizana mamokatra habetsahan'ny asidra niokleika amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny habetsahan'ny soritry hita ao amin'ireo santionany. Na dia mahasoa aza ity mba hahafahana mamantatra, dia mampiditra ...
Torohevitra momba ny famolavolana ny rafitra HVAC birao
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-06-24
Noho ny areti-mifindra manerantany dia miahy bebe kokoa amin'ny fananganana kalitaon'ny rivotra ny olona. Ny rivotra madio sy mahasalama dia mety hampihena ny loza ateraky ny aretina sy ny fandotoan'ny viriosy amin'ny fotoana maro. Mba hanampiana anao hahafantatra syste syste vaovao ...
Ireo mpahay siansa dia manentana ny WHO handinika ny rohy manelanelana ny hamandoana sy ny fahasalaman'ny taovam-pisefoana
Nisy fanangonan-tsonia vaovao iray miantso ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) mba handray andraikitra haingana sy hentitra mba hametrahana torolàlana manerantany momba ny kalitaon'ny rivotra anaty trano, miaraka amin'ny tolo-kevitra mazava momba ny fetran'ny ambany indrindra amin'ny hamandoana an'habakabaka amin'ny tranom-panjakana. Ity hetsika mitsikera ity dia hampihena ny t ...
Nandefa manam-pahaizana manokana any Etiopia i Shina mba hiadiana amin'ny Coronavirus
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-04-17
Ekipa manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana amin'ny valanaretina sinoa androany no tonga tao Addis Ababa hizara traikefa sy hanohana ny ezak'i Etiopia hampijanona ny fiparitahan'ny COVID-19. Ny ekipa dia mandray mpitsabo 12 miady amin'ny fanoherana ny fihanaky ny coronavirus mandritra ny tapa-bolana ...
Drafitra fanadiovana amin'ny dingana 10 mora
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-04-14
Ny "mora" dia mety tsy teny tonga ao an-tsaina amin'ny famolavolana tontolo mora tohina toy izany. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy afaka mamorona famolavolana trano fidiovana mafy ianao amin'ny alàlan'ny famahana olana amin'ny filaharana mitombina. Ity lahatsoratra ity dia manarona ireo dingana lehibe rehetra, hatrany amin'ny fampiharana voafaritra manokana ...
Ahoana ny fomba hivarotana hvac mandritra ny areti-mifindra Coronavirus
avy amin'ny admin tamin'ny 20-04-01
Ny hafatra dia tokony hifantohana amin'ny fepetra ara-pahasalamana, ialana ny fanaovana dokambarotra Manampia marketing amin'ny lisitry ny fanapahan-kevitra ara-dalàna ara-dalàna izay mihasarotra kokoa noho ny fitomboan'ny isan'ny trangana virus ary mihamafy ny fanehoan-kevitra. Mila manapa-kevitra ny mpandraharaha raha oh ...
Mitari-dalana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny kalitaon'ny rivotra anaty sy ny toro-hevitra hitazomana ny IAQ
Mihoatra noho ny teo aloha, ny mpanjifa dia miahy ny kalitaon'ny rivotra Miaraka amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana manjaka ao amin'ny lohateny sy ny olona voan'ny sohika sy ny allergy, ny kalitaon'ny rivotra iainantsika ao an-tranontsika sy ny tontolo anatiny dia tsy zava-dehibe ho an'ny mpanjifa ...
Mety misy mpanamboatra lasa mpanamboatra sarontava?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-03-30
Azo atao ny manao mpanamboatra jeneraly, toy ny ozinina akanjo, ho mpanamboatra sarontava, saingy maro ny fanamby tsy maintsy resena. Tsy fizotry ny alina ihany koa io, satria tsy maintsy eken'ny vatana sy ny fikambanana maro ny vokatra ...
Fanadihadiana fanadiovana FAQ
avy amin'ny admin tamin'ny 20-03-19
Maninona no mila fanampiana amin'ny fananganana trano fidiovana? Ny fananganana trano fidiovana, toy ny fananganana fotodrafitrasa vaovao, dia mitaky mpiasa marobe, ampahany, fitaovana ary fiheverana ny famolavolana. Ny singa mampiditra loharano sy ny fanaraha-maso ny fanamboarana trano vaovao dia tsy zavatra azonao raisina o ...
Fepetra ilaina amin'ny rivotra amin'ny maritrano maoderina
avy amin'ny admin tamin'ny 20-02-20
Miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka ny haitao rivotra. Afaka mifehy ny tontolo iainana anaty trano ny olona ary mamorona toetrandro anaty trano milay. Na izany aza, amin'ny toe-java-misy amin'ny ...
Airwoods nahomby naseho tamin'ny BUILDEXPO 2020
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-02-19
Ny BUILDEXPO faha-3 dia notontosaina tamin'ny 24 - 26 Febroary 2020 tao amin'ny Millennium Hall Addis Ababa, Etiopia. Io no toerana tokana ahazoana vokatra, serivisy ary teknolojia vaovao manerantany. Ambasadaoro, delegasiona mpivarotra ary solontena avy amina ...
Tongasoa eto amin'ny Booth AIRWOODS amin'ny BUILDEXPO 2020
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-02-04
Airwoods dia amin'ny BUILDEXPO fahatelo amin'ny 24 - 26 febroary (Mon, tal, Wed), 2020 ao amin'ny Stand No.125A, Millennium Hall Addis Ababa, Etiopia. Amin'ny laharana No.125A, tsy misy mpivady ianao tompona, mpiantoka na consultant, azonao atao ny mahita ireo fitaovana HVAC nohavaozina & efitrano fidiovana ...
Olana efatra mahazatra an'ny HVAC & ny fomba fanamboarana azy ireo
avy amin'ny admin tamin'ny 20-01-17
Ny olana amin'ny fiasan'ny masininao dia mety hiteraka fihenan'ny fahombiazany sy ny fahombiazany ary, raha avela tsy hita ela loatra ianao, dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana aza. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny antony mahatonga ireo tsy fahampiana ireo dia olana kely ihany. Saingy ho an'ireo tsy voaofana ao amin'ny HVAC ...
Ahoana ny fiarahan'ny Unit Chiller, Cooling Tower ary Air handlingling Unit
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-12-09
Ahoana ny fiarahan'ny Unit Chiller, Cooling Tower ary Air Handling Unit manome fitoerana rivotra (HVAC) amin'ny trano iray. Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ato ity lohahevitra ity mba hahafantarantsika ny fototry ny foibe foibe HVAC. Ahoana ny fiarahan'ny tilikambo fanamainana chiller sy ny AHU Miasa ny rafitra lehibe ...
Fahatakarana ny famerenana angovo amin'ny mpivarotra hafanana Rotary
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-12-03
Ireo singa teknika manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny angovo Fahatakarana ny famerenana angovo amin'ny fifanakalozana hafanana rotary- Ireo singa teknika manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny angovo Ny rafitra fanarenana hafanana dia azo zaraina ho sokajy roa mifototra amin'ny masontsivana termal ao amin'ny rafitra: Ny rafitra ho an'ny famerenana angovo an ...
AHRI dia namoaka ny angon-drakitra fandefasana fitaovana fanafoanana sy fiantohana amerikana aogositra 2019
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-09-15
Heater amerikana fitahirizam-bokatra fanodinana rano ho an'ny septambra 2019 dia nitombo .7 isan-jato, hatramin'ny 330,910 unit, raha oharina amin'ny 328.712 singa nalefa tamin'ny volana septambra 2018. Ny fandefasana heater rano fisakafoanana elektrika dia nitombo 3,3 isan-jato tamin'ny volana septambra 2019 hatramin'ny 323, .. .
Fiaraha-miasa amin'ny Airwoods miaraka amin'ny Tetikasa Efitrano Madio Ethiopian Airlines
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-06-19
Tamin'ny 18 Jona 2019, nanao sonia fifanarahana tamin'ny vondrona Ethiopian Airlines i Airwoods, hanao fifanarahana amin'ny tetik'asa fanamboarana efitrano fidiovana ISO-8 an'ny atrikasa fiaramanidina Oxygen Aircraft Overhaul. Airwoods dia mametraka fifandraisana amin'ny mpiara-miasa amin'ny Ethiopian Airlines, manaporofo tanteraka ny maha matihanina sy mahatakatra ny Airwoods ...
Tsenan'ny teknolojia fanadiovana - fitomboana, fironana ary vinavina (2019 - 2024) Topimaso momba ny tsena
tamin'ny admin tamin'ny 19-06-06
Ny tsenan'ny teknolojia fanadiovana dia mitentina USD 3,68 miliara amin'ny 2018 ary antenaina hahatratra ny sandan'ny USD 4,8 miliara amin'ny 2024, amin'ny CAGR 5,1% mandritra ny vanim-potoana (2019-2024). Nisy ny fitomboan'ny fangatahana vokatra voamarina. Fanamarinana kalitao isan-karazany, toy ny ISO chec ...
Efitra Madio - Hevitra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana ho an'ny trano fidiovana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-05-05
Manara-penitra ny indostrian'ny efitrano fidiovana maoderina ny fenitra manerantany, ny fenitra iraisam-pirenena, ISO 14644, dia mandroso fahamaroan'ny haitao fitadiavana ary manana ny lanjany manerana ny firenena maro. Ny fampiasana teknolojia fanadiovana dia manamora ny fanaraha-maso ny fahalotoan'ny rivotra fa afaka mandray conta hafa koa ...
Ahoana ny fiovan'ny sehatry ny HVAC
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-04-18
Miova ny sehatry ny sahan'ny HVAC. Izany dia fiheverana izay hita miharihary tao amin'ny Expo 2019 AHR tamin'ny volana Janoary lasa teo tany Atlanta, ary mbola maneno hatrany izy volana maro taty aoriana. Mbola mila mahatakatra izay tena miova ny tompon'andraikitra amin'ny sehatry ny trano ary ahoana no ahafahany mitazona hatrany mba hahazoana antoka fa ...
Fitsipika momba ny fanarahan-dalàna amin'ny taona 2018 - fenitra fitsinjovana angovo lehibe indrindra amin'ny tantara
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-04-17
Ny torolàlana momba ny fanarahan-dalàna vaovao an'ny departemanta amerikanina misahana ny angovo (DOE), nofaritana ho toy ny “fenitra fitsitsiana angovo lehibe indrindra teo amin'ny tantara,” dia hisy akony amin'ny fomba ofisialy amin'ny indostrian'ny fanamainana sy ny fanamainana. Ireo fenitra vaovao, nambara tamin'ny 2015, dia kasaina hanan-kery manomboka ny 1 Janoary 2018 ary hiova ...
Fananganana birao vaovaon'ny Airwoods HVAC Oversea Department
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-03-17
Ny biraon'ny Airwoods HVAC dia eo an-dalam-panamboarana ao amin'ny Guangzhou Tiana Technology Park. Sahabo ho 1000 metatra toradroa ny velaran'ny trano, ao anatin'izany ny lapan'ny birao, efitrano fivoriana telo misy habeny, salantsalany ary habe lehibe, biraon'ny mpitantana foibe, birao fitantanam-bola, biraon'ny mpitantana, efitrano fitaizam-batana ...
Tsenan'ny HVAC hikasika ny marika R,000 20.000 avy amin'ny FY16
tamin'ny admin tamin'ny 19-02-20
MUMBAI: Ny tsena fanafanana indostrialy, rivotra ary rivotra (HVAC) dia andrasana hitombo 30 isan-jato hatramin'ny 20 000 Rore mandritra ny roa taona, noho ny fitomboan'ny asa fanamboarana eo amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa sy ny trano. Ny sehatry ny HVAC dia nitombo hatrany amin'ny 10.000 cro ...
Mikarakara ny kalitaon'ny efitranonao madio izahay, mpamatsy vahaolana amin'ny efitrano madio
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-02-14
Manajà ny efitrano fidiovana anaty efitrano fidiovana ho an'ny mpanjifa dingana fahatelo - Fanaraha-maso sy fandefasana entana alohan'ny fialantsasatra CNY Ny tontonana dia tokony hijerena kalitao ary hamafana tsirairay alohan'ny hametrahana azy. Ny tontonana tsirairay dia voamarika ho mora jerena; ary apetraka milamina. Fanamarinana ny habetsany ary ny lisitra amin'ny antsipiriany ...
Nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny mpivarotra Gree mety indrindra i Airwoods
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-12-26
Ny Konferansa Vokatra Vaovao momba ny vokatra vaovao an'ny Gree Central 2019 sy ny lanonana fankalazana isan-taona an'ny mpivarotra dia natao tamin'ny 5 desambra 2018 miaraka amin'ny lohahevitra Gree Innovation Technology, Artificence Intelligence Future. Airwoods, amin'ny maha mpivarotra an'i Gree azy, dia nandray anjara tamin'ity lanonana ity ary nomem-boninahitra t ...
Global Air Handling Unit (AHU) Market 2018 nataon'ny mpanamboatra, ny faritra, ny karazany ary ny fampiharana, vinavina hatramin'ny 2023
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-11-27
Global Market Handling Unit (AHU) Market dia manazava ny antsipiriany feno momba ny famaritana ny vokatra, ny karazana vokatra, ny orinasa lehibe ary ny fampiharana. Ny tatitra dia manarona antsipiriany mahasoa izay voasokajy mifototra amin'ny faritra famokarana habakabaka (ahu) faritra famokarana, mpilalao lehibe, ary karazana vokatra izay ...
HVAC R Expo an'ny fampirantiana BIG 5 Dubai
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-10-27
Tongasoa eto amin'ny fitsidihana ny Booth misy anay ao amin'ny HVAC R Expo an'ny fampiratiana BIG 5 Dubai mitady ny vokatra fividianana rivotra sy rivotra farany farany mifanaraka amin'ny tetikasanao? Avia hihaona amin'ny AIRWOODS & HOLTOP ao amin'ny HVAC & R Expo an'ny fampirantiana BIG5, Dubai. Booth NO.Z4E138; Fotoana: 26 ka hatramin'ny 29 Novambra, 2018; A ...
Fitsaboana Vobl - ekena ho orinasa avo lenta
tamin'ny admin tamin'ny 18-08-01
Airwoods - mpisava lalana fiarovana ny tontolo iainana HOLTOP amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny indostria mpampisaraka bateria lithium Airwoods - Beijing Holtop Environmental Protection Technology Co., Ltd. dia voamarina ho orinasa teknolojia avo lenta. Tafiditra amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena ...
CRAA fanamarinana vokatra HVAC nomena ny HOLTOP AHU
Ny CRAA, mari-pankasitrahana momba ny vokatra HVAC dia natolotra ho an'ny Unit Compact Type AHU Air Handling. Navoakan'ny fikambanan'ny indostrian'ny fampangatsiahana rivotra sy rivotra amin'ny alàlan'ny fitsapana henjana ny kalitaon'ny vokatra sy ny fahombiazany. CRAA fanamarinana dia tombana, ara-drariny ary manam-pahefana ...
Orinasa HVAC Sina Refrigeration HVAC & R Fair CRH2018
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-04-12
Notontosaina tao Beijing nandritra ny 9 ka hatramin'ny 11 aprily 2018. ny Airwoods HVAC Company nanatrika ny foara niaraka tamin'ny fampisehoana ny vokatra ventilation fanarenana angovo hafahafa indrindra ErP2018, fantsom-panafody mafana tsy misy fantsom-pivoarana vaovao, fitaovana fikirakirana rivotra. ..
Airwoods HVAC Systems Solution Manatsara ny fampiononana ho an'ny kalitaon'ny rivotra anaty trano
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 17-08-27
Ny Airwoods dia manandrana ny tsara indrindra hatrany hanolorana ny vahaolana HVAC hanatsara mba hifehezana ny tontolo anaty trano hahazoana fampiononana. Ny kalitaon'ny rivotra anaty dia zava-dehibe toy izany amin'ny fikarakaran'ny olombelona. Ny tontolo iainana anaty trano dia misy poizina roa ka hatramin'ny dimy heny noho ny tontolo ivelany, araka ny US Environmental Protect ...
Niorina ny efitrano fampirantiana vokatra vaovao HVAC Products
avy amin'ny admin tamin'ny 17-07-01
Vaovao tsara! Tamin'ny Jolay 2017, naorina sy nosokafana ampahibemaso ny efitrano fampirantiana vaovao. Mampiranty ireo vokatra HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning): fividianana rivotra ara-barotra, fanamafisam-peo afovoany indostrialy, fifanakalozana hafanana avy amin'ny lozisialy, kodiarana hafanana rotary, feo fiarovana ny tontolo iainana ...